အလှဆင် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ | ပင်းဝေ
အလှဆင်ခြင်းအတွက် ဆေးကြောနိုင်သော ရောင်စုံမြေဖြူမှုန့်
ရေဆေးလို့ရတဲ့ အရောင်ဖျန်း မြေဖြူခဲကို သင့်ပျော်ရွှင်စရာ အခိုက်အတန့်တွေကို အလှဆင်ဖို့ ကွဲပြားတဲ့အရောင်တွေနဲ့ အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ ပါတီထောက်ပံ့ရေး သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်အမျိုးမျိုး နံရံ၊ မြေဖြူခဲ၊ မြက်ခင်း အစရှိသည်တို့ကဲ့သို့။
ရိုက်ပါ။ : ပွဲနှင့်ပါတီပစ္စည်းများ
ပုံနှိပ်နည်း:6ရောင်s
အဲတုန်းက: ခရစ္စမတ်၊ ဘွဲ့၊ ဟယ်လိုဝင်း၊ နှစ်သစ်ကူး
မူလနေရာ: Guangdong၊ တရုတ်နိုင်ငံ
အလှဆင်ရန်အတွက် အပြင်ဘက်တွင် ဆေးကြောနိုင်သော အရောင်ရှိသော မြေဖြူခဲဖြန်းဆေး၊ မြေဖြူခဲဖြန်းဆေးဟုလည်း အမည်ပေးထားပြီး သင့်ပျော်ရွှင်စရာအခိုက်အတန့်ကို အလှဆင်ရန်အတွက် ကွဲပြားသောအရောင်များဖြင့် အလှဆင်ရန်အတွက် များသောအားဖြင့် မျက်နှာပြင်အမျိုးမျိုး သို့မဟုတ် အိမ်တွင်းနှင့် အပြင်ဘက်ပွဲများတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသော မတူညီသောပါတီများ၊ မြေဖြူခဲဘုတ်များ၊ ကားလမ်းများ၊ လမ်းစင်္ကြံများ၊ နံရံများ၊ မြက် စသည်တို့သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ကော်ဓာတ်ပါသော်လည်း ရေအခြေခံကြောင့် သန့်ရှင်းရန် လွယ်ကူသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် eco-friendly နှင့် washable ဖြစ်ပြီး၊ မနှစ်မြို့ဖွယ် အနံ့အသက်များ ကင်းစင်ကာ လူကို သာယာပျော်ရွှင်မှုကို ဆောင်ကြဉ်းပေးပါသည်။
မော်ဒယ် Nနံပါတ် OEM
အရောင် Red၊ ပန်းရောင်၊ အဝါ၊ အစိမ်း၊ အပြာ၊ အဖြူ
နိုင်သလား အရွယ်အစား D: 45mm၊ H: 160မီလီမီတာ
Packing Sအရွယ်အစား- 42.5*၃၁.၈*20.6cm/ctn
ငွေပေးချေမှု 30% ကြိုတင်အပ်နှံပါ။
ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ် အရောင်6ရောင်စုံ ထုပ်ပိုးမှု။ တစ်ပုံးလျှင် 48 pcs.
1.Professional မြေဖြူခဲဖြန်းဆေး၊ ပါတီအလှဆင်ခြင်းအတွက် တောက်ပသောအရောင်6ရောင်
2. အမှုန်အမွှားမရှိ၊ ယာယီဆေးသုတ်ခြင်းကို အဝေးမှဖြန်းပါ။
3. လည်ပတ်ရန် ခက်ခဲသော၊ ဖယ်ရှားရန် လွယ်ကူသည်။
4. Non-အဆိပ်သင့်ထုတ်ကုန်များ, အရည်အသွေးမြင့်, နှိုးဆွအနံ့များမရှိပါ။
ရေဆေးနိုင်သော အရောင်ရှိသော မြေဖြူခဲများကို အပြင်ဘက်ရှိ အရာဝတ္ထုများ၏ မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် အဓိကအားဖြင့် အမျိုးမျိုးသော အခါသမယများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ပါတီအလှဆင်ခြင်းအတွက် ဖြန်းပေးပါ။ ဥပမာအားဖြင့် ပါတီတွင်း ထောက်ပံ့မှု ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံအသီးသီးတွင် ပွဲတော်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ မင်္ဂလာဆောင်၊ ခရစ္စမတ်၊ ဟယ်လိုဝင်း၊ April Fool's Day၊ နှစ်သစ်ကူး စသည်ဖြင့် ပွဲတော်ကြီး သို့မဟုတ် ဘုံပွဲတော်ပါတီများတွင် ပက်ဖြန်းနိုင်ပါသည်။ အရောင်တင်ထားသော မြေဖြူခဲဖြန်းဆေးကို ကတ္တရာ၊ သစ်သား၊ နံရံ၊ ပြတင်းပေါက်၊ မြေဖြူခဲ၊ မြက်ခင်းပြင်များ၊ စသည်တို့ အားကစားသမားများအား လှုံ့ဆော်ပေးရန်အတွက် ဘောလုံးကစားနည်းများတွင် တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ လူများသည် ဘုတ် သို့မဟုတ် အားကစားကွင်းနံရံတွင် ဆောင်ပုဒ်အချို့ကို ရေးသားနိုင်သည်။
1.OEM ကို သင့်လိုအပ်ချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ ခွင့်ပြုပါသည်။
2. သင့်ကိုယ်ပိုင်လိုဂိုကို ၎င်းပေါ်တွင် ပုံနှိပ်နိုင်သည်။
3.Shapes များသည် ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ ပြီးပြည့်စုံသော အခြေအနေတွင် ရှိနေပါသည်။
4.Different size ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
1. အသုံးမပြုမီ ကောင်းစွာလှုပ်ခါပါ။
2. နော်ဇယ်ကို အပေါ်ဘက်ထောင့်အနည်းငယ်တွင် ပစ်မှတ်ဆီသို့ ဦးတည်ပြီး နော်ဇယ်ကို နှိပ်ပါ။
3. ကပ်ခြင်းမဖြစ်စေရန် အနည်းဆုံး6ပေအကွာအဝေးမှ ဖြန်းပေးပါ။
4. ချွတ်ယွင်းပါက နော်ဇယ်ကို ဖယ်ရှားပြီး ပင်နံပါတ် သို့မဟုတ် ချွန်ထက်သောအရာဖြင့် သန့်စင်ပါ။
ယခင်- ပန်းချီနှင့် အမှတ်အသားပြုလုပ်ရန်အတွက် အနီရောင်ဖြန်းထားသော မြေဖြူခဲ
နောက်တစ်ခု: ပွဲတော်ကြီးကျင်းပရန်အတွက် Colour Boss နှင်းဖြန်းဆေး
အကောင်းဆုံး Spray Chalk
Green Spray Chalk ၊
အိမ်လုပ် Spray Chalk
Outdoor Spray Chalk ၊
ခရမ်းရောင် Spray Chalk
အနီရောင် Spray Chalk
စက်ရုံလက်ကားဈေး ယာယီအပြာရောင် မြေဖြူခဲ sp...